Madaxda ma il-duufeen mise dhismaha ciidan qararn ayaa la diidan yahay - Caasimada Online
Home Warar Madaxda ma il-duufeen mise dhismaha ciidan qararn ayaa la diidan yahay
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxda maamul Goboleedyada dalka ayaa isku afgartay dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliyeed, balse waxaa arrintaas lagu tilmaamay inay tahay wadadii lagu burburin lahaa ciidamada Xoogga.
Heshiiskaas waxaa gadaal ka riixeysay dowladda Ingiriiska iyo Mareekanka waxayna aqoonyahanada Soomaliyeed ka digeyn halis ka dhallan karto arrintaan, waxaana jiro olol badan oo arrintaan looga soo horjeedo.
Dadka falanqeeyo siyaasadda Soomaaliya ayaa is waydiinayo haddii madaxda Soomaalida ay il duufeen iyo haddii ay diidan yihiin dhismaha ciidamo qaran oo ay yeelato Soomaliya, waxayna ugu baaqeyn dadka ay talada ka go’do inay ka laabtaan arrintaan.
Heshiiskaan oo ay dowladda Ingiriiska wado ayaa waxaa la filayaa in looga hadlo shirka dhawaan Soomaaliya uga furmi doono Magaalada London, iyadoo lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu halisanaa oo ay Soomaaliya ka qeybgasho.
Haddaba waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa 7-dii qodob oo ay soo jeediyeen Guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaluya: